Ny Force Touch dia afaka nahatratra ny bokotra fitendry amin'ny MacBook | Avy amin'ny mac aho
Pedro Rodas | | Solosaina Mac, tsaho
Apple dia mila teknolojia Force Touch mivoatra hatrany ary porofon'izany dia tsy mijanona ny fametrahana patanty manazava ny fomba fampiasana azy amin'ny vokatra sasany. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nilaza taminay ny momba ny patanty napetrak'i Cupertino izahay manondro an'io Force Touch io dia azo ampiharina eo ambonin'ny Magic Mouse.
Araka ny efa fantatrao, manana ny Magic Mouse 2 eny an-tsena isika izao, Magic Mouse izay natomboka tamin'ny fahatongavan'ilay iMac Retina 21,5-inch vaovao ary ny hany fanavaozana nataony dia ny fananana bateria anatiny izay voafafa amin'ny alàlan'ny tselatra toy ny an'ny iDevices.
Amin'izao fotoana izao ny Force Touch dia eo amin'ny Trackpads an'ny solosaina finday MacBook, ao amin'ny Magic Trackpad 2 ary eo amin'ny efijery an'ny Apple Watch na iPhone 6s sy iPhone 6s Plus vaovao. Na izany aza, tsy mitsahatra ny fikirizany i Apple ary ny patanty resahintsika dia manondro ny fomba fampidirana ny teknolojia Force Touch ao amin'ny klavin'ny MacBook ho avy.
Miresaka momba ny fomba hampiharana an'ity haitao ity amin'ny solosaina finday isika mba hananantsika kitendry mikasika ny tsindry amin'ny tsindry. Tsy vao sambany nanaparitaka hevitra Apple mikasika ny kitendry fitendry, tsy mampihatra azy ireo ankehitriny amin'ny solosaina findainy.
Ny patanty dia manazava fa ny fisian'ny tsindry mora tohina sy ny fikajiana dia mety hiteraka keyboard hafa miankina amin'ny fampiharana ampiasaintsika. Zavatra mitovy amin'ny zavatra mety ho hitantsika amin'ny iPad rehefa mampiseho fitendry hafa izy io arakaraka ny rindranasa nosokafantsika. Ho fanampin'izany, io faritra mikasika io dia ho zava-baovao ary ho voaravaka kely izy io raha afaka manazava azy avy any ambany. ary noho izany dia tsy mila mampiasa tontonana backlit toy ny efijery LED mahazatra izay apetrakao amin'ny fitaovanao rehetra.
Ho hitantsika raha afaka taona vitsivitsy, ity teknolojia ity dia mahatratra ny MacBook amin'ny endrika fitendry na tsia. Ny mazava dia ny rafitra lolo ankehitriny izay niseho tamin'ny MacBook 12-inch dia tsy maintsy hararaotina kely alohan'ny fampidirana ny Force Touch ao amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Ny Force Touch dia afaka nahatratra ny bokotra fitendry tamin'ny MacBook ho avy